15: Ajriin Soommanaa guyyaa qiyaamaa nama birootiif kennamtii? - NuuralHudaa
COVID-19 UPDATE JUNE 01,2020
Majlisni Federaalaa ‘Kaartaan lafa Masjidaa fi Wiirtuu Islaamaaf kenname’ maqaa isaatiin akka qophaa’u gaafate
15: Ajriin Soommanaa guyyaa qiyaamaa nama birootiif kennamtii?
Gaafii: Namni tokko baaba soomanaa ibaadaa keessaa yoo fudhate, sooma hedduu yoo soomane baaburayyaan Rabbi isaa kenna jechuudhan dhagayee. Hadisaratti akkasuma sooma kana osoo soomutti jiruu namni tokko yoo ka’ee zulmii namatti godhee yookiin nama zallamee jedhe, sooma isaa kanarraa ni kafalamaafii? Hadiisa biroo akkan dhagayetti soomni kama abbaa soomeetii wamaa nama biraatiif kafaltii hin ta’uu jechaadhan dhagayee, namni tokko yoo hedduu nama zallame soomana namaa kana ni fudhataahii? Soomnillee numa kafalamaafii? Nama guyyaa qiyaamaa Rabbi duratti yoo dhihaatu sooma kanarraallee numa kafalamaafii? Kana dhageennaan sooma kana hedduu soomane, yeroo dheertuu walitti dhaabee soomanee, waan mana namaa hojjadhuuf jecha soomni kun xiqqoo na miidhee jiraa, hogguun mana yaalaa deemu mana yaalaatitti nyaata babbareedaafii yeroo hedduu waytii kee eeggattee nyaachuu qabda jedhanii, miidhama narra gahe kanalleee dinniina naaf godhanii akkasitti naa himani. Hanga nyaata sani dhiisee soomana walitti dhaabee lubbuu tiyyallee rakkeef Rabbiin wayi na gaafataa?
Deebisaa: Shari’aan Rabbii guddaa waan jedhu; ta duraa namni tokko yoo nama zallamee nama miidhe jedhe ibaadaa isaa hunda irraahuu ni kennamaaf. Akkuma hadiisni Rasuula Rabbii ﷺ ibsee jiru, Ergamaan Rabbi namni tokko sooma isaa, salaata isaa, ibaadaa isaa walitti qabatee ka inni akka gaaraa tokkotti fudhatee dhufa guyyaa qiyaamaa jedha Rasuulli Rabbii ﷺ. Garuu akkuma keeyrii hedduu fudhatee dhufe kana namallee ka arrabaan cabseefi ka harkaan dhaheefii, ka horii isaa nyaateefii ka dhiiga isaa dhangalaase heddu. Zaalima inni waan ta’eef warri zallaamame kun saffii dhaabbataniifii ibaadaa isaa irraa osoo kaan irra kanaa kennamu, osoo kaan irraa kanaa kennamu ibaadaan isaa osoo deeynii miidhama namatti godhe sani kafaltee hin fixin ibaadaan isaa dhumatti jedhan Ergamaan Rabbii. Eegasi warri zulmiin isaan dhaqabe duniyatti miidhamani sun yaa Rabbi haqqi keenya isarraa nuuf fuudhi kaa jennaan, Rabbiin guddaan gartee namtichi hojii ufiituu fixatee akkamitti irraa isinii fuudha, maali irra isinii fuudha jennaan, yoo waan irraa nuu fuutu dhabde dilii keenya ka nu cinqu kana nurraa fuudhii irrra nuu buusi jedhan. Kanaaf dilii namaa osoo itti guuran namtichi funyaaniin lafarra harkifamee ibiddatti darbamaa jedha hadiisni kun. Kana jechuun soomnilleen hin hafneef jechu, huma takkallee hin hafneef jechu. Soomanillee akkasitti namni baaburrayyaan silaa qopheeffameef sana nama zallamuu isaatiif jecha dhabee, gara nama zallamamee san deema soomni isaa.
Gaafii lammataa ammo ka lubbuu tiyya nin rakkee nin beelessee irraa hin gaafatamaa jettu, irraa hin gaafatamtu ta duraatiif wallalumaa irraa kan kee waan ta’eef. Shari’aan Rabbii guddaa waan nuun jedhu Ergamaan Rabbii ﷺ, waan dandeettan qabadhaa ibaadaa irraa, waan Rabbiif gootan Rabbiin ajrii isinii kennuu hin hifatuu hanga isin dalagaa hifattanitti, itti baanaa isin dalagaa ufitti guddiftan hifattanii dhiisuun ni malaa, waan hin hifatamne takka waan dandeetti itti qabdan laalaa qabadhaa nuun jedhe jira Ergamaan Rabbii. Ka dabreef immoo waan hin beeyneef jecha gammachuu diinii jaalattuuf jecha waan gooteef irraa hin gaafatamtuu, ufiduaratti ammoo wama dandeettu qofa goota jechudha.
Sheikh Alii jimmaa
waan si dhibeef deebisaa argattee?
Eeyyen 2 hin arganne 0
537: Zahaba warra kiyyaaf bitee jira akkasuma qawweellee.
536: Sooma namaaf soomuun ni danda’amaa?
535: Namni tokko eega niitii isaa hiikee baatii sagal gahanii walitti deebi’uu ni danda’anii?
534: Ilmaan eessumaa ajnabiidhaa?
533: Salaata garii dhiisaa garii salaatuun akkam?